Waan Obbo Beekan Gulummaa jarreen lamaan DR Solomoon Ungaashee fi Jawaar Mohamad wal bira qabee xiinxalerratti yaada xiqqoo kennadha. – Welcome to bilisummaa
Waan Obbo Beekan Gulummaa jarreen lamaan DR Solomoon Ungaashee fi Jawaar Mohamad wal bira qabee xiinxalerratti yaada xiqqoo kennadha.
bilisummaa May 9, 2017	Leave a comment
Laali Beekan keenya!
Namni kitaaba sodomaa (30) ol akka barreesetti himatu tokko waa-lama ykn namoota lama
yeroo wal-bira qabee xiinxalu yoo xiqqaate namoota xiinxalu ykn waan xiinxalu san beekuun
irraa eegama . Yoo hin beekne ammo, dura qorannoo gochuun haalaan barbaachisaa akka tahe
nama kitaaba tokkicha ammaan dura barreesse jedhuuf illee ifaa dha je’een amana.
Yeroo dhimma lama ykn namoota lama wal-bira qabanii xiinxalanis maaliirratti akka isaan kana
xiinxalan addaan baasanii hubachuu fi murteessuun akkasuma barbaachisaa dha. Xiinxalli tahu
kun maalirratti xiyyeefata? Waa’ee barnoota isaaniitii? Waa’ee laalcha siyaasaa isaaniitii?
Xiinxala kan akka tolchu kan kakaasee hundeen dhimmichaa maal? Jireenya isaanii waliigalaa
tii? Kkf.. addaan baasanii hubachuu fi dubbiftootaaf ifa gochuun waanuma seerri barruu
Waan Obbo Beekan Gulummaa jarreen lamaan DR Solomoon Ungaashee fi Jawaar Mohamad
wal bira qabee xiinxalerratti yaada xiqqoo kennadha.
Fakkeenyaaf: Obbo Beekan , Dr Solomon bara Dargii Dr Haaylee Fidaa waliin mana hidhaa
keessatti oromoof dararamaa turan jedha. Obbo Beekan Dr Haaylee Fidaa fi Dr Solomoon
yeroo bara Dargii mana hidhaa turan san maaliif akka hidhamanillee waan quba qabu natti hin
fakkaatu. Akka barreefamni isaa mul’sutti akkasumas sab-qunnamtii adda addaa irratti yaada
kennurratti jarreen kun lamaan (Dr Haayilee Fidaa fi Dr Solomoon Ungaashee) qabsoo oromoof
jedhanii akka waan hidhamanii akeeka. Bar Dr Haaylee Fidaa fi Dr Solomoon ‘Mellaa Itiophiyaa
Sooshaalist Niqinnaaqee (MESON) (All Ethiopian Socialist Movement)’ turanii . Ati nama
dandeettii qabu akkamitti waan MESON dhaabateef haga ammaa hin hubannee? Kun siif waan
Yoo warreen MESON Oromoo dhaaf lolaa fi qabsaa’aa turan jettee beekta tahe osoo xiinxala
kana hin tolchin waan qorachuun sirra ture. Dhugaan ture garuu, paartii yeroo san turan
keessaa kan akka MESON qabsoo oromoo bal’eessuurratti bobba’e hin turre. Isaani kan
qabsaawan oromoo ‘xabbaab’ jechuun mana hidhaatti kan guursisan, kan ajjeesisan, kan biyyaa
Yoo waan MESON dhaabbateef hin beektu tahe, sagantaa isaanii caalaa barruu isaan torbaan
lamatti ykn ji’atti baasaa turan YE sefiiw hizb dimxi lakoobsa tokkoo hamma sodomii wahiitti
kan deemaa ture barbaadii dubbisi, dura qorannoo godhi.
Mee ‘Yesefiw hizb dimx’ lakkoobsi 35 waa’ee maalii ture jedhii Solomoon gaafadhu. Waani ani
keessaa yaadadhu yoon irraa siif tuqe akkas jedha. Tokkummaa Itiophiyaaf yaaddoo guddaa fi
diinni guddaan shororkaa amma EPRP’n deemsisaa jirtu osoo hin taane lola ABO ‘n karaa bahaa
banee jiru tahuu mootummaa Dargiif odeefannoo gumaacha.
Isaan kun (ABO) yeroodhaan baduun murteessaa dha jedha. Yoo yeroodhaan baduu baatan
dhukkuba biyya keenyaa (Itiophiyaa) tahuun waan hafu miti jedha Kanarraa ka’aniiti kan
bakka hundaatti oromoota hidhuu fi ajjeesuun kan eegalan. . Osoo MESON yeroo san Dargiif
meeshaa tahuu bira taree mootummaa dhuunfatee jiraatee, xiyyeeffannaan isaanii inni
guddaan qabsoo oromoo dura barbadeessuu ture, dhiheenya kana garuu, akka waan MESON
qabsoo oromoof dhaabbatee tureetti afrsaa jiraachuun keessan maaliif akka tahe ifaa miti.
Har’a Dr Solomon Ungaashee yoo ani sabboonaa dha, sabni oromoo fi biyyi oromoo dhugaan
miidhamanii jiru jedhee amana tahe homaa rakkoo hin qabu. Namoonni dogogoran deebi’anii if
baruu fi if sirreessuun hamaa hin qabu. Garuu, utuu lubbuun jirruu seenaa haqaaquun gaarii
miti. Yoo ifiif seenaa yeroo dhihoo jal’iftanii nutti himtu tahe kan nafxanyootaa waan
komataniif hin jiru. Waan dabre akkuma turetti himuu fi hubachiisuun gaarii dha.
Obbo Beekan mee Dr Solomoon osoo Ameerikaa hin dhufin dura waan oromoo, waan
oromummaa eessumatti maqaa dhahee beeka nuuf himi. Nama kana waliin teessee haasoftee
beektaa? Isa durii yoo dhiifne har’a ejjennoon Dr Solomon gaaffii oromoo irratti qabu hagam
beekta? Barreefamuma keerraa yeroon laalu ati nama kana waan beektu natti hin fakkaatu.
Bar telefoonaan wal faarsanii waliin taphachuu , waan Facebook gubbaatti dadarbatmu laalanii
eenyummaa walii ciccululuqsuu fi dhugaan eenyummaa namaa adda.
Mee osoo Dr Solomoon fi Dr Haayileen mana hidhaa taa’anii qubee nuuf tolchan jettee waan
ifiifuu hin beekne nu fudhachiisuu hin yaalin, waan biraan haahafuu, waan oromummaas
haahafuu mee waan Dr Solomoon ture warreen waliin MESON turan gaafadhu. Miseensa
akkamii ture? Eessatti ‘cadre’ ture? Mana hidhaatii haala akkamii garsiisaa ture? Mana hidhaatii
akkamitti bahe? Dr Haayilee Fidaa osoo har’a lubbuun jiraatee haala Dr Solomoon Ungaashee
mana hidhaatti garsiisaa ture akkamitti hubata laata jedhii namoota MESON turan amma kan
lubbuun hedduminaan Ameerikaa fi Awropaa jiran gaafadhu.
Sadarkaadhuma MESON ttillee Dr Haayilee Fidaa har’a osoo lubbuun jiraate Dr Solomoon
waliin yeroo hedduu walbira qabdee maqaa kaasuu keetiif si komachuun isaa hin oolu jedheen
Asirratti qooda Dr Haayilee Fidaa qubee afaan oromoo bu’uressuu irratti qabu akka waan galata
dhorkachuuf jedheetti akka hin fudhatamne akka hubatamun fedha, gumaachi inni qubeerratti
kenne ol-aanaa dha. Ejjennoon gaaffii oromoo irratti qabu garuu waan biraa ti.
Jawaar barnoonni isaa saaynsii siyaasaa BA qaba jete, MA isaa garuu saynsii siyaasaa miti jette.
MA isaa maal akka tahe yoo hin beektu tahe maaliif barreesita waa’ee namaa. Barruun kee kun
waan beektu nu-hubachiiftee akka barru nu gochuu mitii? Waan ifiifuu hin beekne maaliif nutti
himuu yaalata. Osoo hin barreesine dura maaliif qorattee nuuf hin himin? Maal ati nama
Harvard baratu/te mitii?
Dr Solomon buddeensaa mootummaa Ameerikaaf hojjetee nyaata……Jawar maallaqa
oromootiin jiraata… Amma rabbi jedhii maal kun? Mootummaa Ameerikaa isa kam? Eessaa?
Namni Ameerikaa keessaa hojjetu hundumtuu mootummaaf hojjeta jettee yaaddaa laata?
‘Mangistiif hojjeta’ jechuu keetii? Jechi kun hagam boodeetti hafaa tahuu hubattaa laata?
Akkan laaluti Obbo Beekan, mee xiqqoo afuura fudhadhuutii waa hubadhu, ati akka jetutti
ijoollee dha waan itti jarjarttulee hin qabdu. Hidhata kees tolfadhu.
Previous Qeeqafi Taajjabbii Kuntaala Tokkoorra Dalagaa Qabatamaa Kiiloo Takkaatitu Caala!
Next TPLF and mutagenic servants are facing nuclear bomb of the Oromo people